2013 ခုနှစ်ရဲ့ Miss Grand Myanmar အလှမယ် ထားထက်ထက်ကတော့ ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ ဆေးရုံတက်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတချို့နဲ့အတူ သူမရဲ့ Surprise အစီအစဉ်လေးကလည်း ထားထက်ထက်ကို ပရိသတ်တွေသိစေနိုင်မယ့် အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
အလှမယ်ထားထက်ထက်ဟာ 2013 ခုနှစ်ရဲ့ Miss Grand Myanmar ဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ ပရဟိတအလုပ်တွေကိုပါ အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်ကိုင်ခဲ့သူတစ်ဦးပါ။ သူမကတော့ ဆေးရုံတက်နေခဲ့ရတာ ရက်အတော်ကြာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးရုံတက်စဉ်အချိန်မှာအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ သူမဝက်သက်ပေါက်နေခဲ့တာကို နောက်ဆုံးကျမှ သိရှိခဲ့ရပြီး ငွေကျပ် ဆယ့်လေးသိန်းကုန်ကျခဲ့တာတွေကြောင့် သူမတက်ခဲ့တဲ့ ဆေးရုံအကြောင်းကိုဖွင့်ဟပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
“7.12.2018 ညဘက်ထဲက နေမကောင်းဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်နေလို့ဆိုပြီး ဆေးကြိုသောက်ပြီး အိပ်ခဲ့ပေမယ့် နောက်နေ့မနက်မှာ တော်တော်လေး နေမကောင်းဖြစ်လို့ အလုပ်တောင်သွားနေရင်း မလုပ်နိုင်တော့လို့ကားပေါ်မှာပဲ အိပ်နေရတယ်။ တနေကုန်လဲ ဆေးသောက်ပြီးနားနေပေမယ့် အခြေအနေက မသက်သာပဲ တော်တော်လေးဆိုး မထနိုင်ဖြစ်လာတာနဲ့ ဆေးခန်းသွားမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီး ကိုယ်ရှိနေတဲ့နေရာနဲ့ အနီးဆုံးဆေးရုံကိုပဲ အမြန်ရောက်ချင်နေတာနဲ့ လူကလဲ ဘယ်လိုမှတောင့်မခံနိုင်တော့တာနဲ့ ရွှေဂုံတိုင်ဆေးရုံကို ၈ နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာ ရောက်ခဲ့တယ်။”
“Nurse မလေးတွေ ဆရာဝန်မလေးတွေ လာမေးကြတယ်။ အဖျားတိုင်းတယ်။ အဖျားက ၁၀၄…… အဖျားတော်တော်တက်နေတယ်တဲ့ ဘာဆေးသောက်ထားလဲတွေ ဘာတွေမေးကြတယ်။ ပြီးတော့ ဆေးရုံတက်ချင်လားတဲ့ ကိုယ်ကလဲ စလာကတည်းက တရက်လောက်တော့ တက်ဖို့လိုအပ်တယ်ထင်တယ် ဆေးချိတ်ရမယ်ထင်တယ်ဆိုပြီး လာတော့ တက်မယ်လို့……ဘယ်ဆရာဝန်နဲ့ပြမလဲတဲ့? ရတယ် ဘယ်ဆရာဝန်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့…..ဒါနဲ့ ဆရာဝန်လာတာတော့ ခဏစောင့်ပေးနော်တဲ့….. အင်းပေါ့ဆိုပြီး စောင့်တာ တော်တော်ကြာလာတော့ ညီမလေးကို မလာသေးဘူးလား ခေါ်ပါဦး လူကဘယ်လိုမှမခံနိုင်တော့ဘူး အရမ်းအိပ်ပျော်ချင်နေပြီ အိပ်လို့ကမရဘူးဆိုပြီး ကယောင်ကတန်းတွေလဲဖြစ်လာပြီလို့…..သွားခေါ်တော့ လာတော့မှာပါ ခဏပဲနော်ဆိုပြီး ထပ်စောင့်ရတယ်။ (စောင့်နေရစဉ်အတွင်းမှာ အဖျားတိုင်းတာ သွေးပေါင်ချိန်တာကလွဲလို့ ဘာမှမလုပ်ပေး အဖျားကြအောင်လဲ မလုပ်ပေး) စောင့်ရင်း စောင့်ရင်း ၉:၃၀ သွားတယ်။”
“အရေးပေါ်အနေနဲ့လာတဲ့လူနာက ဆရာဝန်ကို ၁ နာရီခွဲလောက်အရင်ဆုံးခံစားနေရပြီးစောင့်လိုက်ရတယ်။ အားကစားသမားဖြစ်နေလို့သာတော်သေးတယ်။ တော်ရုံခံနိုင်ရည်ရှိသူမဟုတ်ရင် သေသွားနိုင်တယ်။ သေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့လဲ သေလဲသေပေါ့နော်။ ၁ နာရီခွဲလောက်စောင့်ပြီးတော့မှ ဆရာဝန်ရောက်လာပြီဆိုပြီး လာစမ်းတယ်။ အဲ့ဒီမှာ သွေးစစ် ECG ရိုက် ဓာတ်မှန်ရိုက် ပုလင်းချိတ် အစာအိမ်ကြည့် အကုန်စစ်ရတယ်။ ဆရာဝန်စမ်းသပ်ခနဲ့ အရေးအပေါ်အတွက်ဆိုပြီး ၆၃,၀၀၀ ပေးရတယ်။”
“ဆေးရုံတက်တဲ့ရက်မှာလဲ ခေါင်းကအရမ်းကိုက်ညဘက်ဆို တညလုံးအိပ်မရတာ နေ့တိုင်းပိုင်း မနက်ပိုင်းလေး ခဏလေးအိပ်ပျော်ပြီဆို တစ်ယောက်က ဝုန်းဆိုဝင်လာပြီး သွေးပေါင်ချိန်မယ်ဆို ချိန်သွားတယ်။ ပြီးတာနဲ့ပြန်အိပ်တော့ ၁၀ မိနစ် ၁၅ မိနစ်လောက်ကြာတော့ နောက်တစ်ယောက်ထပ်ရောက်လာတယ် အဖျားတိုင်းမယ်ဆိုပြီးတိုင်းသွားတယ်။ ပြီးပြီပေါ့ နောက်ထပ် ၁၀ မိနစ်လောက်နေနောက်တစ်ယောက်ထပ်ရောက်လာပြန်ရော ဆေးထားမလို့ပါဆိုပြီး ဟော ပြီးတော့ နောက်ထပ် ၁၀ မိနစ်လောက်နေတော့ ပုလင်းချိတ်တာကြည့်မယ်ဆိုပြီးရောက်လာတယ်။ ပုလင်းကိုလဲ ဘယ်ချိန်ကချိတ်သွားလဲကိုယ်တွေကိုပြန်မေးတယ်။ အရမ်းမကြာသေးဘူးပြောတော့ အော် AM နဲ့ PM မှားရေးသွားတယ်နဲ့တူတယ်တဲ့ 😲 ဆေးထိုးတဲ့အခါ မှာထိုးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ 😱အဲ့လိုနဲ့ လာတဲ့ လူလဲကုန်သွားရော ဆရာဝန်ကြီးလာပါမယ်ဆို အော်ပြီး တံခါးတွေ ဖွင့်ထားပါရော…. အိပ်မရတော့ပြန်ကော….. ဆရာဝန်ပြန်သွားတော့ သန့်ရှင်းရေးကြမ်းတိုက်တာတစ်ယောက်ဝင်တယ်။ အိမ်သာထဲတိုက်ဖို့တစ်ယောက်ဝင်တယ်။”
“အမှိုက်ပုံးသိမ်းဖို့တခါဝင်တယ်။အမှိုက်ပုံးတောင် အစိုနဲ့အခြောက်နေရာမှားထားတယ်။ ပြောချင်တာက တချို့ဟာတွေ တစ်ယောက်ထဲလုပ်လိုက်လို့မရဘူးလား??? ဟုတ်ပါပြီ လူတွေကိုအလုပ်ပေး ပိုက်ဆံပေးချင်တာဆိုလဲ သွေးပေါင်တိုင်းတဲ့သူနဲ့ အဖျားတိုင်းတဲ့သူ တခါထဲလာဝင်လာလိုက်ကြလဲ ရတယ်လေ အခုဟာက တံခါးလဲသေချာမခေါက် ညင်သာစွာလဲမဝင် ဝုန်းကနည်း ဝုန်းကနည်းနဲ့ လူနာမပြောနဲ့ လူနာစောင့်တွေပါလန့် လန့်သွားတယ်….. အဲ့ဒါနေ့တိုင်းပဲ ဆေးရုံကို တစ်ပတ်တိတိတက်ခဲ့တဲ့နေ့တိုင်းပဲ လူနာကနေ့တိုင်းအဖျားကမကျ အိပ်မရ ခေါင်းတွေကိုက် စိတ်တွေညစ်လာလို့ သေချင်နေပြီ အရမ်းပင်ပန်းနေပြီ တကယ်မခံစားနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီး ညညတွေဆို အသက်ရှူရင်းလွတ်လွတ်သွားတာ ခဏ ခဏ….. ပင်ပန်းတာကလဲ အဖျားကမကျတဲ့အထဲ ဝမ်းကတစ်နေ့ကို ၁၈ ခါလောက်နေ့တိုင်းတစ်ပတ်လုံးသွားနေတာ…. ၂ ရက်လောက်သွားပြီးချိန်မှာ လူကမျော့နေပြီ မခံနိုင်တော့ဘူး ဘာမှလဲစားမဝင်တော့ ပုလင်းချိတ်နဲ့သာဆက်နေရတာ…ဝမ်းပိတ်ဆေးဘာလို့ မတိုက်တာလဲမေးခိုင်းတော့ အထဲမှရှိတဲ့ပိုးတွေကုန်သွားအောင်မတိုက်တာပါတဲ့ ဝမ်းပိတ်ဆေးတိုက်လိုက်ရင် အထဲမှာပိုးတွေကျန်မှာစိုးလို့ဆိုပြီး မတိုက်တာပါတဲ့….ဒါနဲ့ဝမ်းပိုးနဲ့ သွေးပိုးတွေစစ်မယ်ဆိုပြီး ပိုးမွေးထားရမယ် စစ်မယ်ဆိုပြီး စစ်တယ်။”
“မျက်နှာမှာ အနီစက်တွေထွက်လာတော့ သွေးလွန်တုတ်ကွေးဖြစ်မှာစိုးလို့ဆိုထပ်စစ်တယ်။သွေးဖြေထွက်လာတော့ သွေးလွန်းတုတ်ကွေးလဲမဟုတ် ၊ တိုက်ဖွိုက်လဲမဟုတ် ရိုးရိုး infection ဝင်တာ Virus ဝင်တာပါတဲ့ ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ အဖျားခဏကျတုန်းနေကောင်းပြီထင်ပြီး ဝမ်းသာနေတာ ညနေပိုင်းကျတော့အဖျားက ပြန်တက်ပြန်ရော….. ညဘက်လဲမကျ နောက်ရက်တွေလဲမကျ အနီစက်တွေက ပိုပိုအရမ်းများလာတယ်။ ဘာဖြစ်လဲဇဝေဇဝါတွေဖြစ်နေတုန်းပဲ……သွေးထပ်စစ်ရမယ်ဆိုပြီး စစ်ရပြန်ရော ဆေးရုံးတက်နေစဉ်တပတ်အတွင်းနဲ့ စစတက်တဲ့ရက်ပါ အပါအဝင်ဆို ၈ ရက်တခါ ၊ ၉ ရက်တခါ ၊ ၁၀ ရက်တခါ ၊ ၁၁ ရက်တခါ ၊ ၁၃ ရက်တခါ ၊ ၁၅ ရက်တခါ ဆေးကို ၆ ခါစစ်ရတယ်…… လိုတာထပ်များနေတာပဲ…..အနီစက်တွေ တပြင်လုံးဖြစ်လာပြီး ခြေထောက်တွေနားရောက်ခါနီးမှ ဝက်သက်ဖြစ်တာဖြစ်မယ်ဆိုပြီး အဖြေထွက်လာတော့တယ်။ ဒီကြားထဲမှာ ဆရာမတစ်ယောက်က ကြီးမှဝက်သက်ပေါက်တယ် ဟုတ်လားဆိုပြီး ရီနေလို့ ကြီးရင်ဝက်သက်မပေါက်ဘူးလားလို့မေးတော့ ပေါက်ကြပါတယ်တဲ့….ငယ်ငယ်တုန်းက ကာကွယ်ဆေးထိုးထားလဲ ပေါက်ချင်ရင် အခန့်မသင့်ရင်ပေါက်ကြတာပါပဲတဲ့…. အဲ့ဒါဆိုဘာလို့လှောင်စရာလိုလုပ်ပြီး ရီတာလဲ??? ဝက်သက်ပေါက်တာ ရှက်စရာများဖြစ်နေလို့လား ဘယ်သူမှလဲ မပေါက်ချင်ပါဘူး သူ့ဟာသူပေါက်လာတာကို 😞”
“နောက်တော့မှ ခြေဖဝါးထိရောက်ပြီးရင်ပျောက်တယ် အဖျားလဲကျတယ်ဆိုတာနဲ့နောက်နေ့ဆင်းတော့မယ်ပြောလိုက်တော့ တရက်လောက်နေပါဦးတဲ့ ဆင်းချင်နေပြီလို့ပြောတော့မှသွေးအဖြေစောင့်ပြီးမှဆင်းလိုက်ပါတဲ့ဆိုလို့ မနက် ၅ နာရီလောက်ကလာဖောက်ထားတဲ့ သွေးအဖြေကို ၁၁:၀၀ နာရီလောက်မှာရတော့မှ ဝက်သက်ဖြစ်တာ သေချာပါတယ်တဲ့…. 😞 ဆေးရုံကနေလဲဒီနေ့ဆင်းပါပြီ…….”
“စပြီးရောက်တဲ့နေ့ကတည်းက ရလိုက်တဲ့နောင်တက ခုချိန်ထိပါပဲ….ရက်ချိန်းတောင်ပြန်သွားမပြတော့ဘူး။ဒါဆိုဘာလို့အဲ့မှာတက်ခဲ့သေးလဲဆိုတော့ မတတ်နိုင်တော့လို့ လူကအရမ်းပင်ပန်းပြီးနေရာမရွှေ့နိုင်တော့လို့ပါ။ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ပြောတာ ကြားဖူးတယ် ရွှေဂုံတိုင်ကနာမည်ပျက်နေပြီ ပိုက်ဆံလဲမလိုအပ်ပဲသဲ့ယူနေတာ ရောဂါတခြား ကုတာတခြားတွေ ၊ service လဲမကောင်းဘူး ၊ ပေါ့ဆတယ် ၊ စွဲကုပြီး ရိတ်တယ်တွေပြောတုန်းက မယုံခဲ့ဘူး အဖေတုန်းကတည်းက ပြနေတာတစ်ကြောင်း ကိုယ်နေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာက အနီးဆုံးကိုအမြန်ဆုံးရောက်ချင်နေတာကတစ်ကြောင်း အဲ့လောက်လဲဆိုးမယ်မထင်မှတ်ထားတာကတစ်ကြောင်းကြောင့် သွားဖြစ်ခဲ့တာ….နောက်ဆိုရင်တော့ လုံးဝ လုံးဝ မသွားတော့ပါဘူး အဲ့ဆေးရုံသွားမယ့်အစား တခြားဆေးရုံးကြီးတွေမှာ ကားဆူညံသံမကြား အေးဆေးသက်သာနဲ့ ဒီကုန်ကျစရိတ်လောက်ဆို ဘန်ကောက်လောက်မှာပဲသွားကုပါတော့မယ်..”
“ကုန်ကျစရိတ်ကတော့ အားလုံးပေါင်း ၁,၃၈၃,၈၈၅ ပါ။ ဟိုဟာဒီဟာတွေနဲ့ဆို ၁၄ သိန်းပါပဲ….အဖျားတက်ပြီး ဝက်သက်လေးဖြစ်တာ ၁၄ သိန်းတောင်ပေးရတာပါပဲ…အဓိကပြောချင်တာက ဘယ်သူ့ဘယ်သူကိုမှစော်ကားလိုခြင်း ၊ တိုက်ခိုက်လိုခြင်း ၊ နစ်နာစေလိုခြင်း လုံးဝမရှိပါ။ ကိုယ်ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ အဆင်ပြေလိုက်တာ တန်လိုက်တာလို့ မခံစားရပဲ စိတ်ညစ်မှုနဲ့ စိတ်ပင်ပန်းမှု မတန်လိုက်တာဆိုပြီး ခံစားရလို့ ဆေးရုံရဲ့ အခုလိုလုပ်ထားတဲ့ စနစ်အပေါ်မှာလဲ လုံးဝမကြိုက်လို့ လူနာတစ်ယောက်အနေနဲ့ တော်တော်ခက်ခဲပင်ပန်းခဲ့ရပါတယ်ဆိုတာကို ရေးသားလိုက်ပါတယ်။”လို့ သူမအကောင့်ကနေပြီးတော့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ညမှာရေးသားဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အလှမယ်ထားထက်ထက်ကတော့ လက်ရှိမှာဆေးရုံကပြန်ဆင်းလာပြီဖြစ်ပြီး သိပ်မသက်သာသေးလို့ အိမ်မှာပဲအနားယူနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။We Love Cele
Photos-Htar Htet Htet
ဖြိုးမြတ်အောင်နဲ့ စုံတွဲမသီဆိုနိုင်တဲ့အပေါ် အထင်လွဲမှုတွေကို ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ တင်ဇာမော်
အိမ်ထောင်ပြုသွားတဲ့ သူထူးစံအတွက် ဂုဏ်ယူကျေနပ်နေတဲ့ ခွန်းဆင့်နေခြည်
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားသို့ မိသားစုလိုက် သွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ကြတဲ့ ရဲလေးနဲ့ဂျိုကာတို့ရဲ့ ချစ်စရာမိသားစုပုံရိပ်များ